China Silicone isongo kunye neewristbands mveliso kunye nabenzi | SJJ
Izacholo zeesilicone kunye neebhanti zesiko yinto entle, ephantsi yokuthengisa esetyenziselwa ukuqokelela imali, umsitho kunye nemisebenzi yesisa. Yenziwe ngezinto eziyi-100% ze-silicone, ezingezizo ityhefu ezizinzileyo kunye nexesha lokuhambisa ngokukhawuleza.
Izacholo zeSiliconekunye neebhanti zewrists zezona mveliso zethu ziphambili, eziya zithandwa ngakumbi kwihlabathi liphela. Iibhanti zewilicone ziyaziwa kumgangatho weprimiyamu kunye ne-eco-friendly silicone rubber. Izinto ze-silicone yindawo yokusingqongileyo kunye nokutya, inokuthwala ubushushu obuphantsi okanye obuphezulu, keIzacholo zeSiliconekunye neebhande zewayini zinokusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo nawo onke amaxesha onyaka. Iibhanti zewilicone zihamba kakuhle kwaye zithambile ebantwaneni, ke ziyathandwa ezikolweni. Izacholo zesilicone ziyabhetyebhetye kwaye zomelele ngokwaneleyo ukuba abantu abadala bazisebenzise kunyuselo okanye kwiminyhadala efana nezemidlalo, i-carnival okanye amanye amaqela. Iimpawu ezahlukeneyo zinokubhalwa, ziphathwe, ziprintwe okanye kubhalwe i-laser ngokwesicelo sakho. Uyilo olwahlukeneyo ukuhlangabezana neemfuno zakho zasendle, ukubonisa iikhonsepthi zakho zelogo, kwaye zomelele ukuhlala ixesha elide. Inkqubo ye-Abicah isongos kunye neebhanti zewrist ngesiqhelo zenziwe ngobukhulu obuqhelekileyo babantwana okanye abantu abadala, kodwa zikwenziwe ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi.
Ngaphezulu kweminyaka engama-36 yembali, umzi-mveliso wethu uyakwazi ukubonelela ngeebhanti zentsimbi ezikumgangatho ophezulu kunye nezacholo ngexesha elifutshane. Sinamava atyebileyo kwiiodolo ezinkulu zeeSilicone Bracelets kunye neewristband, kodwa akukhathaleki nokuba zi-odolo ezinkulu okanye ii-odolo ezincinci zamkelekile ngalo naliphi na ixesha. Imisebenzi yobugcisa yaseFektri iya kubonelelwa ukuze ufumane imvume yakho ngaphambi kweesampulu okanye kwimveliso. Abasebenzi bethu banobuchule kwaye amantombazana athengisayo ahle ngesiNgesi. Sijonge phambili ekuphenyweni kwakho!
Izixhobo: umgangatho ophezulu we-silicone
Ubungakanani: Ubungakanani obuqhelekileyo zii-202 * 12 * 2 mm zabantu abadala, 190 * 12 * 2 mm yabantwana. Ubukhulu ngentando zamkelekile.
Imibala: Unokutshatisa imibala ye-PMS, ukujikeleza, icandelo, ukukhanya ebumnyameni, imibala efanelekileyo iyafumaneka.
Logos: iilogo zingaprintwa, babebhala, debossed, -inki-linxibelelene, laser libhalwe kunye nabanye
Ukupakisha: 1 pc / ibhegi poly, okanye ngokwe customers'request
MOQ: Akukho sithintelo se-MOQ
Egqithileyo Iiseti zokubhala
Okulandelayo: Iingqekembe Zomkhosi
Isacholo samaChristian Silicone
Abicah Bracelets Bulk
Abicah Bracelets Lixabiso
Abicah ngerabha izacholo
Abicah Slap Bracelets